शाकाहारी भोजन र परदेश बसाई
संगीता भट्ट, जापान । परको देश परदेश, भए र पुगेसम्म सबैलाई पसिना बगाउन होइन ,घुम्न र रमाउन जान मन पर्छ । तर आर्थिक अबस्था उकास्न नेपालीको रोजाइमा परेको एउटा पाटो हो बैदेशिक रोजगार ।
देश छोडेर हिडेंपछि नयॅा वातावरणमा समायोजित हुन संघर्षका दिन सुरू हुन्छन् । सुरूमा साथीसॅगी हावा, पानी, लवाई खवाई ,रितिरिवाज चालचलन, भाषा,हिडाई केही पनि मिल्दैन । बस्दै रहदै जादां बिस्तारै परिवर्तनसिल प्राणी मानिस वातावरण र समाज टोल सहरमा समायोजित हुन पुग्छ । जसले गर्दा जिबन यापनमा सहजता आउन थाल्छ ।
समायोजनका क्रममा परदेशमा मैले भोगेको एउटा असजिलो भोगाई हो शाकाहारी खाना ।
परदेश छिरेपछि सुरूसुरूका दिनमा के खाने के नखाने विषयले असहज गरायो । मासु हालेको कुन र नहालेको कुन भाषा समस्याका कारण छुट्याउन निक्कै गार्ह्रो पर्यो । परिकार धेरै भए पनि मासु नहालेको भने कमै भेटिदा रहेछन् । त्यसबेला मासुकै टुक्रा टपक्क टिपेर नखाए पनि लसपस त धेरै खाइएछ भन्ने हाल महशुष भएको छ ।
नेपालमा चिकेन फेल्लेबरको बाईबाई चाउचाउ खुब खाईयो अझै जापान आएपछि पनि हलालबाट मगाएर खाइन्छ तर जापानमा बुता फेल्लेबरको रामेन भने किन हो कुन्नि आत्माले माग्दैन ।
सुरुमा जापान आउने बित्तिकै मैले कम्बिनीको फ्राइड आलु किनेर खाएको थिए । जुन आलु ग्यू निकु कोरोक्के, पोर्क ससेजी र चिकेन एउटै तेलमा फ्राई हुदो रहेछ । त्यो कुरा मलाई एक वर्ष पछि मात्रै थाहा भयो । जुन बेला आलुमा मासुको लसपस होला भन्ने मेलै सोचेकै थिएन ।
हुन त थाह नपाइ परेको लसपसले म मा कुनै किसिमको नकारात्मक असर त देखिएन । मन लागेको बेला खानै नहुने भन्ने पनि होइन । थाहा नपाउदा परेको लसपस थाहा पाएपछि मात्रै मैले यस्तो खाएछु भन्ने मनमा लाग्यो ।
जापानमा मासु नखाने जापानीज लगभग भेटिदैन र शाकाहारी खानेकुराको लागि जापान निक्कै अस्जिलो छ । जापानमा बसोबास गर्दै आएका मासु नखाने केही नेपाली र भारतीयलाई लक्षित गरेर शाकाहारी खाना पक्कै पनि बन्नदैन । शूद्घ शाकाहारी खानाको लागि आफैले बनाएर नै खानु पर्ने हुन्छ । फेरी विदेशमा खाना नै खानको लागि भनेर काठामा कुरेर बसिराख्न पनि सम्भव हुदैन ।
मासु नखाने धर्म मानेको हो ?
सॅगै काम गर्ने जापानीज साथीहरू मासु नखाने कुरा सुनाउदा छक्क पर्छन् र प्रश्न गर्छन् । मासु नखाने धर्म मानेको हो ? नेपालमा कोही पनि मासु खादैनन् ? घरमा अरूले खान्छन् की खादैनन् ?
धर्म कै कारण मासु नखाएको चै होइन तर,मासु नखानुमा धर्मको प्रभाब भने पक्कै पनि छ ।
हाम्रो घरमा गरिने पूजा पाठ व्रतको असर पनि हो शाकाहारी खाना । बा आमाले पूजा पाठ गर्ने दिन बसेको भोको खाएको चोखोले सक्दा मासु नखाए पनि हुने रहेछ भन्ने मानसिक प्रभाव पार्छ नै पार्छ । मैले मासु खान छोडेको १६ वर्ष भयो । सम्झना छ , सामान्य एलर्जीका कारण मेरो आत्माले मासुको चाहाना राख्न छोड्यो, परिवारले पनि मासु नखाने छुट दियो र म मासु नखाने अर्थात शाकाहारी भए । मासु खानका लागि घर परिवार र साथीसॅगीबाट बेला बेलामा अनुरोध भने नभएको होइन । त्यो अनुरोधलाई कुनै कारण बिनानै मनले स्वीकार गर्न नसक्दा मासू प्रति कुनै चाहना नै छैन ।
नेपालमा मासु नखानेलाई त्यति धेरै खानै पर्छ भन्ने जबरजस्त पनि छैन । मासुको सट्टा प्रसस्त फलफूल, तरकारी, दुध मही ध्यू ले पनि उत्तिकै प्रथामिकता पाउछ । शाकाहारी भोजनालय पनि चोक चोकमा भेटिन्छन् ।
उसो त शाकाहारी हुनुमा फाईदा पनि छ । एक वर्ष अघि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित द जर्नल अफ न्यूट्रिशनको रिपोर्टका अनुसारशाकाहारी मानिस मांसाहारी भन्दा लामो जीवन बाँच्दछन्।
प्रतिवेदनका अनुसार शाकाहारी मानिसहरूमा फ्याटको स्तर कम हुन्छ, जबकि एन्टिआक्सिडन्टको मात्रा अधिक हुन्छ। यसले मानिसमा रोगहरूको जोखिम कम गर्दछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूमा पेटका रोगहरू पनि मांसाहारी मानिसहरू भन्दा कम देखिएका गर्दछन् ।
अध्ययनका अनुसार शाकाहारी मानिससँग मांसाहारी भन्दा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ। शाकाहारी खानामा अधिक पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन् ।
फलफूल,तरकारी र अन्नमा आधारित आहारमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ए,सी,ई,पोटेशियम र म्याग्नेशियम आदि,पाइन्छ । यद्यपि यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले सेवन गर्ने खाना सन्तुलित छ कि छैन ।